ဟင်နရီ -Norman Bethune - နာမည်ကြီး သူရဲကောင်းများ - ပြော နာမည်ကြီး အရာ
နာမည်ကြီး သူရဲကောင်းများ ပြော မှုအရာတို့ကို, ပုံပြင်များ, ပုံများ, နောက်ခံပုံများ
အားလုံး နိုင်ငံရေးသမား ကိုယ်လက်သန်စွမ်းသူ အဆိုတော်များ လုပ်ငန်းရှင်
ဟင်နရီ -Norman Bethune
ဟင်နရီ-Norman Bethune (မတ်လ 3, 1890 - နိုဝင်ဘာလ 12, 1939), ကနေဒါ၏ကွန်မြူနစ်ပါတီ, internationalist တိုက်လေယာဉ်ကျော်ကြားတဲ့ thoracic ခွဲစိတ်ဆရာဝန်။ 1890, ကနေဒါ, Gravenhurst, အွန်မှာမွေးဖွား 1935 ခုနှစ်တွင် 1938 ခုနှစ်တွင်ကနေဒါ၏ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, 1939 ခုနှစ်နာမကျန်းသေဆုံး, anti-ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ရန်တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ကြ၏။ တနှစ်နှင့်သူသည်တရုတ်ဆန့်ကျင်ဂျပန်တော်လှန်ရေး၏ဝဒေနာခြင်းနှင့်ချွေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်နှစ်ခွဲ။ မော်စီတုန်းသူတစ်ဦးမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, တစ်စင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, တစ်ဦးကငျြ့ဝတျလူတစ်ဦးသည်အောက်တန်းကနေလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, အခြားသူများကလူတစ်ဦးအကျိုးကျေးဇူးကပြောပါတယ်။
မတ်လ 3, 1890, ဟင်နရီ-Norman Bethune Gravenhurst ၏မြောက်ပိုင်းအွန်မြို့တစ်မိသားစုသင်းအုပ်ဆရာမွေးဖွားခဲ့သည်။ Bethune စွန့်စား, သတ္တိကြီးပွားသတည်း။6နှစ်သမီးအရွယ်, တစ်ဦးတည်းကစားရန်တိုရွန်တိုမြို့ကနေလမ်းအတွက် Bethune, ပျောက်လမ်းလျှောက်, ဒါပေမယ့်သူမငိုခဲ့ပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်မှာသူ့ကို ယူ. တဲ့အခါ, ငါ့အမိသည်သူ့ကိုဝေဖန်သူကဆိုသည်။ "ငါစွန့်စားမှု၏အရသာကိုမြည်းစမ်းချင်" ပြီးတာနဲ့သူကတောင်တက်သွားကြဖို့သူ့အစ်ကိုကို ယူ. လှပတဲ့လိပ်ပြာကိုတွေ့ရှိခဲ့သူ ah ah Chase လိုက်မယ်လို့ခဲ့ peak ဖမ်းကြောက်စိတ်နှင့်ဟစ်ငယ်အစ်ကို၏ခွမှာ, etc ဖမ်းမိခဲ့သည်။ 8 နှစ်သမီးအရွယ်, Bethune, စာငှက်ဖမ်းဖမ်းမိခှဲစိတျ, အဘိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်သင်ယူကြသည်။ သူဟာ 10 နှစ်အရွယ်ပင်လယ်အော် Qi အုပ်ချုပ်မှုပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးရေကူးချင်ခဲ့တယ်, တစ်ဦးအားကြီးသောရေကူးခဲ့ပါတယ်။
1916 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီ-Norman Bethune ဆေးပညာတက္ကသိုလ်တိုရွန်တို၏ကျောင်း, ဘွဲ့ဒီဂရီကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ 1922 ခုနှစ်တွင်သူသည်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏တော်ဝင်ကောလိပ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ 1923 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအလွန်တိကျခိုင်မာစွာစာမေးပွဲများမှတဆင့် Bethune အင်္ဂလန်၏ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏လက်တွေ့ဘွဲ့လွန်တော်ဝင်ကောလိပ်ဖြစ်လာရန်။ 1924 ခုနှစ်တွင်တီဘီခံစားနေရပြီး Bethune ဆဲ tenaciously, သူ၏ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်ချက်၌ကြီးသောအောင်မြင်မှုနှင့်တကွ, "အတု pneumothorax ကုထုံး" ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂုဏ်သတင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်မှာ၎င်း၏မူရင်းဆေးဝါး thoracic ခွဲစိတ်။
အစောပိုင်း 1928 ခုနှစ်မှာ, တီဘီနာမကျန်း Bethune ပြီးနောက်ပြန် Montreal, ကနေဒါ, တော်ဝင်ဗစ်တိုးရီးယားဆေးရုံ, မြို့ McGill University မှ, ကနေဒါ, thoracic ခွဲစိတ်ရှေ့ဆောင်အက်ဒွပ်မှ - ပထမဦးဆုံးလက်ထောက်ဆရာဝန် Archibald, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်တူရိယာများ၏ 12 မျိုးကိုသူ၏တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကာလအတွင်း လည်း 14 သြဇာစာတမ်းများထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ 1931 ၏နွေရာသီ, Bethune နှင့် Philadelphia တွင် Pirin သား-Norman Bethune တီထွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်များအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူသောလိုက်လျောသဘောတူညီမှုမူပိုင်ခွင့်, လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့, နှင့် "Bethune ဖုန်းအတွက်" ခွဲစိတ်တူရိယာနာမည် - ထိုသို့သောပစ္စည်း 22 မျိုးစုစုပေါင်း အလွန်ဆောင်အနေအထားအတွက်ထိုအချိန်ကထိုအတူရိယာ။ 1933 ခုနှစ်တွင်သူသည်အတိုင်ပင်ခံကနေဒါဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်ဒေသခံကျန်းမာရေးဌာနအဖြစ်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ 1935 ခုနှစ်တွင်သူသည် Thoracic ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း, ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာ 1935, Bethune ကနေဒါ၏ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ 1936-1937, စပိန်ပြည်တွင်းစစ် join ဖို့နိုင်ငံတကာဆန့်ကျင်ဖက်ဆစ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖြစ်စပိန်မှ Bethune ။ သူဒဏ်ရာရကယ်ဆယ်ရေးစနစ်၏တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဤအချိန်အတောအတွင်းကစစ်တပ်မိုဘိုင်းခွဲစိတ်ဆေးရုံဖြစ်ထွက်လှည့်ကျယ်ပြန့်သည့်ရှေ့ပြေးပုံစံများတွင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒဏ်ရာရအလွန်အကျွံသွေးထွက်ကယ်တင်ရန် transfusion စေရန်, သူသည်အသွေးပို့ဆောင်များအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုတီထွင်ပြုလုပ်ဆေးပညာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
1937 ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Anti-ဂျပန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 1937, Bethune တရုတ်ကော်မတီမှနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး sign up ကိုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအတွင်းပြောက်ကျားနှင့် set up အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုဖို့ပဏာမယူနယူးယောက်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 2, 1938, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဦးလုံလောက်သောအရေအတွက်အားတပ်ဆင်ထား Bethune, ဗန်ကူးဗားကနေဟောင်ကောင်ကို seagoing ရေယာဉ်များယူပါ။ မတ်လ 31, 1938, တရုတ် Yan'an ဆီသို့ရောက် လာ. , ကနေဒါနဲ့အမေရိကန်ရေးစပ်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ မော်စီတုန်းအားရင်းနှီးခင်မင်စွာ Bethune နှင့်သူ၏ပါတီနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 1938, သူကျန်းမာရေးအကြံပေးကတော့အဌမလမ်းကြောင်းတပ်မတော်စစ်ရေးဒေသအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 1938 ဖေဖော်ဝါရီလ 1939 မှသူသည် Shanxi နှင့် Hebei Yanbei ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကငျြ့ကိုကုသမှုအသင်းများကိုဦးဆောင်လေးလ, 300 ကျော်ဆခွဲစိတ်မှု, ဟာ operating အခန်း၏တည်ထောင်ခြင်းနှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား 13 750 ကီလိုမီတာခရီး , ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်များတဲ့ဆကျဆံဖို့။ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် 1938 ခုနှစ်တွင်သူသည်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ၏အနောက်တောင်စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းသည်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ရန် Hebei သို့ပြန်သွား၏။ ကနျြးမာရေးကျောင်းများ၏တည်ထောင်သူ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကေဒါတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကလေ့ကျင့်; စစ်မြေပြင်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဖတ်စာအုပ်များအမျိုးမျိုး၏ပြင်ဆင်မှု။
Bethune ကယ်တင်ရန်အတွက် Laiyuan ကောင်တီအတွင်းရှိဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာအောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်း 1939, တွင်, Hebei Motian စစ်တိုက်အလယ်လက်ချောင်း scalpel ရောဂါကူးစက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ထားခဲ့တယ်။ ခွဲစိတ်ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းသို့ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်မှုကြောင့်နိုဝင်ဘာ 12, 1939 နံနက်, Bethune, ကုသမှုထိရောက်မှုတန်ကောင်တီ, Hebei ပြည်နယ် Huangshi ကျေးရွာ၌သေကြ၏။ "ရွေးချယ်ထားသောအလုပ်လုပ်" ၏ဒုတိယ volume ထဲမှာမော်စီတုန်း wrote: ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်နိုင်ငံတကာက၏ဝိညာဉ်သည်အသောမိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, အဖြစ်နိုင်ငံခြားသားမဟုတ် Self-်ထမ်းဆောင်စိတ်ရင်း, လွတ်မြောက်မှုကို၏တရုတ်လူရဲ့အကြောင်းမရှိ။ မည်သည့် Self-အကျိုးစီးပွားမပါဘဲအခြားသူများပြင်ဆည်းကပ်၏ရဲဘော် Bethune ရဲ့ဝိညာဉ်, ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်လူများအတွက်မိမိအ, အလုပျအတှကျတာဝနျရှိအစွန်းရောက်ဇွဲထက်သန်ပြသနိုင်ဖို့။ ရဲဘော် Bethune ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်ဖြစ်၏သည့်အဌမလမ်းကြောင်းတပ်မတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်, သူ့ဆေးပညာကအရမ်းတောက်ပဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် အစုံ: အိုင်ဗင် IV Vasilyevich
နောက်တစ်နေ့ အုပ်စုတစ်စု: Genghis Khan က
•ပြင်သစ် Ares နပိုလီယံဘိုနာ
•Weiqing ဟန် တရုတ် သူရဲကောင်း
•Genghis Khan က
•အမေရိကန်စစ်ဘက် တပ်မှူး ဂျော့ခ်ျ စမစ် Patton
•Mohandas Karam Chand ဂန္ဒီ ( Mohandas Karamchand Gandhi က )
•မဟာအလက်ဇန္ဒား ( Alexander the Great )
•ဆိုဗီယက် မာရှယ် Georgi Konstantinovich Zhukov
•တရုတ် အမျိုးသားရေး သူရဲကောင်း လင်း